Momba anay - Shijiazhuang Changhong Building Decoration Engineering Co., Ltd.
Changhong dia niorina tamin'ny 1992 izay miorina ao Shijiazhuang Hebei China, akaikin'i Beijing.
Changhong dia manome serivisy fivarotana samihafa ho an'ny orinasam-pamantarana marika, Ho mpitondra hafatra amin'ny hatsarana sy mpamorona sehatry ny orinasa maitso no fahitanay.
Ny fanajana, ny tsy fivadihana, ny andraikitra, ny fanavaozana, ny fampiharana ary ny fiaraha-miasa no soatoavinay indrindra.
Ao amin'ny tsenan'i Shina, CH dia misahana manokana amin'ny serivisy fivarotana tokana amin'ny fivarotana, ao anatin'izany ny famolavolana, ny fanamboarana, ny fampiasa lozisialy, ny fananganana, aorian'ny serivisy sy ny serivisy fikojakojana.
Ny orinasanay manokana dia 42000 metatra toradroa, manana atrikasa hazo, atrikasa vy ary atrikasa plastika, atrikasa fanaovana hosodoko ary atrikasa famonoana vovoka.
Ary manana fitaovana famokarana mandroso toy ny Panel Dividing Saw, CNC Nesting Machine miaraka amin'ny AL + UL, CNC 6-drilling Machine, CNC Point hanondro ny ivon-toeram-pitrandrahana. Ny vokatra dia nanondrana tany amin'ny firenena 30, ary ny mpanjifa dia afa-po aminay. Tongasoa eto hitsidika anay ary hanontany, faly izahay manome anao ny serivisy tsara indrindra.
Tandremo ny fiaraha-monina, amboary ny tontolo iainana, zao ny maitso, ary miasà ho mpamorona ny hatsarana. Raiso ny fiarovana ara-toekarena, tsara tarehy, fitsitsiana angovo ary fiarovana ny tontolo iainana ho toy ny torolàlana sy tanjona kendren'ny CH handavaka sy hanitatra ny haavon'ny toerana famolavolana
Ny fivondronan'ny singa sy ny fizarana ankapobeny dia tsapa fa miankina amin'ny R&D sy ny toha-pamokarana.
Ivotoerana famokarana 6, ny foibe tsirairay dia omena tsipika famokarana mandeha ho azy sy semi-automatique marobe, ary afaka mandamina ny famokarana miovaova mifanaraka amin'ny habetsahan'ny baikon'ny mpanjifa.
Manamboatra manokana ny serivisy manokana sy ny fomba famokarana bitika kely izahay ho an'ny filaharana manokana, hahatratrarana ny fangatahan'ny lamina manokana sy ny filaharana kelin'ny mpanjifa.
Ny fizotran'ny fikorianan'ny sampana dia azo atao ho an'ny props betsaka.
Manome fepetra haingana sy samihafa ary manokana ho an'ny mpanjifa
CH dia omena ny rafitra fitantanana logist fitehirizana modem, ary mahatsapa ny fitantanana rafitra ara-potoana sy ara-maso ho an'ny fividianana vokatra, marketing, fitehirizana ary ny fizotran'ny fitaterana lojika miaraka amin'ny alàlan'ny kaody bara sy ny teknolojia fampahalalana tsy misy tariby. Mandritra izany fotoana izany, ny mpanjifa dia afaka manontany ny fanaovana sonia ny fitaterana sy ny fahazoana ny vokatra amin'ny fotoana tena izy amin'ny alàlan'ny fitaovan'ny terminal mifanaraka amin'ny laharan'ny kaomandy mifanaraka amin'izany.
Ny foibe lozisialy dia misy departemanta telo: sampana fandefasana, departemanta fitehirizana ary departemanta fitaterana, misy velarana fitahirizana 11000 metatra toradroa, ao anatin'izany 5000 metatra toradroa ny trano fanatobiana entana afovoany sy trano fitehirizam-bolan'ny 25. Ny fahaiza-mitahiry dia miparitaka manerana ny firenena ary afaka manome serivisy fizarana sy fitaterana manerana ny firenena ny mpanjifa.
Amin'ny paikady ho avy, isika dia "hanao fandaharam-potoana amin'ny fandaharam-potoana amin'ny logistics, amin'ny fomba ara-potoana; Ahoana ny fomba hampihenana ny vidiny sy ny fanatsarana ny fifaninanana vokatra; Omeo fampahalalana momba ny fandaharam-pirenena avo lenta sy mahomby kokoa, ataovy azo antoka ny fizarana lozisialy, manara-maso ny fizotrany rehetra ary manatsara bebe kokoa" toy ny tanjona lehibe, manatsara hatrany ny fifaninanana fitantanana, manome ny mpanjifa servisy fitehirizana lafatra sy logistika tonga lafatra kokoa, ary mametraka fototra mafy orina ho an'ny serivisy CH "tokana"
Amin'ny alàlan'ny fandrakofana ireo biraon'ny sampana any amin'ny faritra samihafa, dia ampidirinay ny loharanon-karena avo lenta amin'ny toerana eo an-toerana ary hamaly haingana ny fanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa amin'ny fivarotana fananganana.
Biraon'ny sampana 30+ manerana ny firenena
17 andro hamitana fivarotana
5 andro hamitana fivarotana ao amin'ny magazay
Ekipa mpanao fananganana laharana voalohany 200
Valiny amin'ny adiny 3
Serivisy aorian'ny fivarotana an-tserasera 7x24
Ny CH dia manome fahafaham-po ny filan'ny mpanjifanay amin'ny tontolon'ny antsinjarany (fotodrafitrasa, fitaovana, fitaovana, raharaha fivarotana sns) aorian'ny fanamboarana fivarotana ary manome fitantanana manara-penitra mifanaraka amin'izany.